ချစ်သောသူ - ဖတ်ကြည့်ပါအုံး
online လာတိုင်းchatting နဲ့ပဲမကုန်ဆုံးစေချင်ဘူး...
ကျွန်တော်၊ ဇနီးနဲ့ နှစ်နှစ်သမီးလေး Oregon State မှာရှိတဲ့ Red River Valley တစ်နေရာမှာ ချောင်ပိတ်မိနေခဲ့တယ်။ လူသူအရောက်နည်းတဲ့ နှင်းတလင်းပြင်မှာ ကျွန်တော်တို့ကား ပျက်သွားလို့ဖြစ်တယ်။
နှစ်နှစ်ကြာ လေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ ဆရာဝန်သင်တန်းပြီးတဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ပျော်ပွဲကျင်းပဖို့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစု ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ခဲ့တဲ့ဆေးပညာနဲ့ ပျက်နေတဲ့ကားတစ်စီးကို ကောင်းအောင် ကျွန်တော် မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ဒီအဖြစ်က အနှစ်၂ဝရှိခဲ့ပြီ ဆိုပေမယ့် အခုချိန်ထိ ကျွန်တော့်မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာ Oregon State က ကောင်းကင်ပြာလိုပဲ ကြည်လင်နေဆဲဖြစ်တယ်။ အဲဒီနေ့မနက်က အိပ်ရာနိုးတာနဲ့ မီးဖွင့်ဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အမှောင်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ပိတ်မိနေပြီ ဆိုတာကို ကျွန်တော်သတိထားလိုက်မိတယ်။ ကြိုးစားပြီး ကားစက်ကို ကျွန်တော်နိုးကြည့်ပေမယ့် အရာမရောက်ခဲ့ဘူး။ ကားထဲကနေ ကျွန်တော်ထွက်ပြီး စိတ်တိုတိုနဲ့ အော်ဟစ်ကျိန်ဆဲလိုက်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဆဲဆိုသံကို ပတ်ဝန်းကျင်အမှောင်က ဖုံးအုပ်ခဲ့တယ်။
ကားက ဘက်ထရီကုန်သွားလို့ ဖြစ်မယ်လို့ ဇနီးနဲ့ကျွန်တော် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေက ကျွန်တော်ကားပြင်တဲ့ အတတ်ထက် ပိုကောင်းတဲ့အတွက် ကားလမ်းမကြီးပေါ်အထိ လမ်းလျှောက်ပြီး အကူအညီတောင်းဖို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်။ ဇနီးနဲ့သမီးကိုတော့ ကားပေါ်မှာ စောင့်ခိုင်းစေခဲ့တယ်။
အချိန် ၂နာရီ ကြာပြီးနောက် အဆစ်လွဲသွားတဲ့ ခြေထောက်တစ်ဖက်နဲ့ လမ်းမကြီးပေါ် ကျွန်တော် ထော့နဲ့ထော့နဲ့ ရောက်လာခဲ့တယ်။ သစ်တွေတင်ထားတဲ့ ကားတစ်စီးကိုတွေ့လို့ ကျွန်တော်လက်ပြ အကူအညီတောင်းလိုက်တယ်။ အဲဒီ သစ်တင်ကားက ကျွန်တော့်ကို ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင် အရောက်မှာ ဆင်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
ဓာတ်ဆီဆိုင်ထဲ ကျွန်တော်လှမ်းဝင်လိုက်တယ်။ ရုတ်တရက် တနင်္ဂနွေနေ့ ဆိုင်ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးက ကျွန်တော့်စိတ်ကို တောင့်တင်းသွားစေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အများသုံးဖုန်းနဲ့ စုတ်ပဲ့ဟောင်းမြေ့နေတဲ့ ဖုန်းစာအုပ်တစ်အုပ်က ကံကောင်းစွာနဲ့ အဲဒီနေရာမှာ ရှိနေခဲ့တယ်။ မိုင် ၂ဝကျော်လောက်ဝေးတဲ့ မြို့တစ်မြို့က တစ်ခုတည်းသော ကားဝပ်ရှော့ကုမ္ပဏီကို ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ ကားပြင်ဆရာ ပေါ့ပ်က ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ အခက်အခဲကို နားထောင်ပြီး "ကောင်းပြီ" လို့ အဖြေပေးတယ်။
နေရာအတည်တကျ သူ့ကို ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တယ်။
"တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ကျွန်တော်နားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိစ္စမရှိဘူး.. နာရီဝက်အတွင်း အဲဒီနေရာကို ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်"
။ ဒါပေမယ့် ကားပြင်စရိတ် သူပိုတောင်းမှာကို ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိပြန်တယ်။
အနီရောင် လက်လက်ထနေတဲ့ ကရိန်းကားကို မောင်းပြီး ပေါ့ပ်ရောက်လာခဲ့တယ်။ သူကားနဲ့ ကားပျက်တဲ့နေရာကို ကျွန်တော်တို့ ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။
နေရာအရောက် ကားပေါ်က ကျွန်တော်ခုန်ချပြီး ပေါ့ပ်ကိုလှည့်ကြည့်တဲ့အခိုက် ကျွန်တော် အံ့သြတုန်လှုပ်သွားခဲ့မိတယ်။ ချိုင်းထောက်နှစ်ဖက်ကို အားပြုပြီး ပေါ့ပ် ကားပေါ်က ဆင်းလာတာကို တွေ့လိုက်တယ်။ သူ့အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးက ဗလာကြီးဖြစ်လို့.. ချိုင်းထောက်ကို အားပြုပြီး ကားပြင်ဖို့ ပေါ့ပ်ပြင်ဆင်နေချိန် ကျွန်တော်ခေါင်းထဲ ကိန်းဂဏန်းတစ်ချို့ ပေါ်လာပြန်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကားပြင်ခ သူဘယ်လောက်တောင် တောင်းလိုက်မလဲ?
"သြော်... ကားက ဘက်ထရီကုန်သွားတာ.. ဘက်ထရီအား ခဏသွင်းလိုက်တာနဲ့ ခင်ဗျားတို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခရီးဆက်နိုင်ပြီ"
ပေါ့ပ်က ဘက်ထရီကို အားသွင်းလိုက်တယ်။ ဘက်ထရီသွင်းနေတုန်း ကျွန်တော့်သမီးကို ပေါ့ပ်က အပျော်မျက်လှည့်ပြနေခဲ့တယ်။ ဓာတ်အားသွင်းပြီး ကြိုးတွေ ပေါ့ပ်သိမ်းဆည်းနေတဲ့အချိန် ကုန်ကျစရိတ်ကို ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။
"ဟာ... မလိုပါဘူး.. ပေးစရာ မလိုပါဘူး" ပေါ့ပ်အဖြေက ကျွန်တော့်ကို တွေဝေသွားစေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ထပ်မေးလိုက်ပြန်တယ်။
"မလိုပါဘူးဗျာ.. ကျွန်တော် ဗီယက်နမ်မှာတုန်းက ဒီထက်ဆိုးတဲ့ အခက်အခဲကိုတောင် လွတ်မြောက်လာနိုင်ခဲ့သေးတာပဲ။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်ခြေနှစ်ချောင်းလုံး ပြတ်သွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကယ်ခဲ့တဲ့လူက ဒီအကြင်နာကို ထပ်လက်ဆင့်ကမ်းဖို့ မှာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ကို ခင်ဗျားတစ်ပြားမှ ပေးစရာမလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ မှတ်ထားပေးပါ။ အခွင့်အရေးရတာနဲ့ ဒီအကြင်နာကို တစ်ခြားလူဆီ လက်ဆင့်ပြန်ကမ်းပေးပါ"
အနှစ် ၂ဝတိုင်ခဲ့ပါပြီ... ဆေးကျောင်းနဲ့ဆေးဆောင် ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် ကျွန်တော်အလုပ်များနေခဲ့တယ်။ ကျောင်းက ဆေးကျောင်းသားတွေကို ကျွန်တော် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ရတယ်။
တစ်ခြားနယ်ကလာတဲ့ ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူစင်ဒီ ကျွန်တော့်ဆီ စာလာသင်တာ ၁လရှိပါပြီ။ သူ့မိခင်လည်း သူနဲ့ ခဏလိုက်နေတဲ့အတွက် ဆေးရုံအနီးအနားမှာပဲ သူတို့နေခဲ့ကြတယ်။ စစချင်းမှာ အရက်ကြောင့်၊ မူးယစ်ဆေးကြောင့် ရောက်လာတဲ့ လူနာတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ စမ်းသပ်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီလူနာကို ကုသဖို့ ကုသနည်းတွေ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးကြတဲ့အချိန် စင်ဒီမျက်ရည်ဝဲနေတာကို ကျွန်တော်သတိထားခဲ့မိတယ်။
"ဒီကိစ္စကို မဆွေးနွေးချင်လို့လား စင်ဒီ"
"မဟုတ်ပါဘူး.. ဆရာ။ အဲဒီလူနာက ကျွန်မ အမေလည်းဖြစ်နိုင်လို့ပါ"
နေ့လယ်စာ စားပြီးနောက် နှစ်ရှည်ကြာ အရက်ကျေးကျွန်ဖြစ်နေတဲ့ စင်ဒီ့မိခင်အကြောင်းကို အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ စင်ဒီက မျက်ရည်တစ်ဖက်၊ နှပ်တစ်ဖက်နဲ့ သူခံစားခဲ့ရတဲ့ အရှက်၊ ဒေါသ၊ အကဲ့ရဲ့တွေကို ပြောပြခဲ့တယ်။
စင်ဒီ့ မျော်လင့်ချက်တွေ ပြည့်ဝအောင် သူ့မိခင်ကို ဆေးကုဖို့ ကျွန်တော်စကားစလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့မိခင်အတွက် စိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွေ ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးလိုက်တယ်။ မိသားစု၊ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ အားပေးကူညီမှုအောက်မှာ အရက်ဖြတ်ကုသဖို့ စင်ဒီမိခင် သဘောတူလိုက်တယ်။ အရက်သေစာ သောက်စားတဲ့ မိခင်ကြောင့် စင်ဒီတို့ရဲ့ မိသားစုဘဝ မသာမယာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အခုတော့ သူတို့မိသားစုရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ မျော်လင့်ချက် အလင်းတွေကို ကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
"ဆရာ့ကို ဘယ်လိုကျေးဇူး ဆပ်ရမလဲ မသိဘူး" စင်ဒီအမေးကြောင့် နှင်းပြင်မှာ ပိတ်မိခဲ့တဲ့အဖြစ်နဲ့ အောက်ပိုင်းပြတ်နေတဲ့ ကားပြင်ဆရာကို ကျွန်တော်ပြေးမြင်ယောင်လိုက်မိတယ်။ အဲဒီနောက် စင်ဒီကို ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
"ဒီအကြင်နာကို လက်ဆင့်ကမ်းပါ.. စင်ဒီ"
ဟုတ်ပါတယ်... ကျေးဇူးပြုပြီး အကြင်နာတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပါ။ ဒီလောကကြီး ပိုပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့က ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာ အနည်းအများ၊ ကားအကြီးအသေးတွေနဲ့ အောင်မြင်မှုကို တိုင်းတာခဲ့ကြတယ်။ ဝန်ဆောင်မှု အရည်အချင်း၊ လူလူချင်း အပြန်အလှန် နွေးထွေးဆက်ဆံမှုတွေကမှ အောင်မြင်မှုရဲ့ တကယ့်စံထားဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ မသိခဲ့ကြတယ်။-- Martin. Luther. King II
မူရင်းရေးသားသူ... Dr. Kenneth G Davis (肯;尼;士;戴;維;斯;)
အရွယ်ရောက်ပြိးလုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်နေပြိဖြစ်တဲ့လူငယ်တစုပာာ သူတို့ရဲ့ တက္ကသိုလ် တုန်းက ဆရာဆိကိုသွားလည်ကြတယ် ဆရာကလည်းတပည့်တွေကိုတွေ့
တော့ ၀မ်းသာအာရဖြစ်နေတယ် ဆရာနဲ့စကားလက်ဆုံ ပြောရင်း တပည့်တွေက သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာတွေ့ရတဲ့ စိတ်ဖိစိးမှုတွေအကြောင်ညည်းညူကြတယ်
ဆရာကပြုံးရုံပြုံးပြိး မိးဖိုထဲက ပုံစံမျိုးစုံတဲ့ခွက်တွေကို သွားယူလာတယ် ကြွေခွက်၊ဖန်ခွက်၊ ပလပ်စတစ်ခွက်၊ရိုးရိုးခွက်၊ ဈေးကြိးပေးရတဲ့ခွက် စတဲ့ခွက်မျီုးစုံပေါ့
ဆရာ က ကိုယ့်ဘာသာ ရေခပ်သောက်ဖို့ ခွက်တွေယူခိုင်းလိုက်တယ် တပည့်တွေ ရေ တယောက်တခွက်စိရပြိးတဲ့အချိန်မှာ ဆရာက " သတိထားမိကြလား
ခွက်တွေထဲက ဈေးကြိးတဲ့ လှတဲ့ ခွက်တွေကိုပဲ ရွေးယူသွားကြတာ ကျန်ဈေးပေါတဲ့ ခွက်နဲ့ ရိုးရိုးခွက်တွေကိုပဲ ထားခဲ့ကြတယ်.. ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုပဲ
လိုချင်ကြတာ သဘာဝပဲ..ဒါပေမယ် အဲဒါကိုက မင်းတို့ပြောတဲ့ စိတ်ဖိစိးမှုရဲ့ အရင်းအမြစ်ပဲ ..မင်းတို့တကယ်လိုချင်တာက ရေပဲလေ ခွက်မှမပာုတ်တာ..
ဒါမယ့် အားလုံးက မသိစိတ်နဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ခွက်ကိုပဲ ရွေးယူကြတယ်...." " ဘ၀မှာလည်း ဒိလိုပဲ...ဘ၀ကရေနဲ့တူပြိး အလုပ်တို့ ငွေကြေးတို့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်
အသိုင်းဝန်းထဲက နေရာတခု ဆိုတာတွေက ခွက်တွေနဲ့တူတယ်..သူတို့က ဘ၀ကို ထောက်ပံ့ဖို့အတွက် အထောက်ကူပြု ပစ္စည်းသက်သက်ပဲ..
သူတို့ကြောင့် ဘ၀ရဲ့အနှစ်သာရ ကပြောင်းမသွားဘူး...ဒါကြောင့် ခွက်တွေပေါ်မှာ အာရုံစိုက်နေရင် အထဲမှာရှီတဲ့ ရေရဲ့ အနှစ်သာရကို ခံစားဖို့ အချိန်မိမှာမပာုတ်တော့ဘူး
၄တန်းတက်နေတဲ့ သားက အိမ်မှာဆို ဘုရင်တစ်ဆူလိုပါပဲ။ တစ်အိမ်လုံးက
၀ိုင်းချစ်ကြတယ်။ သားက ကြက်ဥအရမ်းကြိုက်တယ်။ အထူးသဖြင့် ကြက်ဥကြော်ပေါ့။
တစ်နေ့မနက် ကျွန်မ ကြက်ဥခေါက်ဆွဲ နှစ်ပွဲလုပ်ပါတယ်။ ခေါက်ဆွဲတစ်ပွဲပေါ်မှာ
ကြက်ဥတစ်လုံးတင်ပြီး ကျန်တစ်ပွဲက ကြက်ဥမပါဘူး။ ခေါက်ဆွဲကို စားပွဲပေါ်တင်ပြီး
" သား....ဘယ်တစ်ပွဲစားမလဲ ? "
"ကြက်ဥပါတဲ့တစ်ပွဲ မေမေ" သားက ကြက်ဥပါတဲ့ တစ်ပွဲကို လက်ညှိးထိုး ပြီးပြောတယ်။
"မေမေကို ကျွေးပါလား သား... ပုံပြင်တစ်ပုဒ်မှာ လေးနှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ ကောင်လေး
တစ်ယောက်က သစ်တော်သီးမျှသတဲ့။ သားက ဆယ်နှစ်တောင်ရှိနေပြီ မေမေကို
"တကယ်မမျှဘူးပေါ့ ? "
သားက ဆတ်ခနဲ ကြက်ဥကိုယူပြီး ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။
"နောင်တမရဘူးလား သား" ကျွန်မမေးလိုက်ပြန်တယ်။
"မရပါဘူး" ကျန်ကြက်ဥကို ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်ရင်း သားကပြောပါတယ်။
သားစားတာကို ကြည့်ပြီးမှ ကျွန်မခေါက်ဆွဲကို စစားဖို့ပြင်လိုက်တယ်။
ကျွန်မရဲ့ခေါက်ဆွဲမှာ ကြက်ဥကြော် နှစ်လုံး ဖွက်ထားတာကို သားမြင်အောင်
ပြလိုက်ပြီး.. "သား...တပန်းသာချင်တဲ့လူဟာ ဘယ်တော့မှ အသာမရနိုင်ဘူးဆိုတာ မှတ်ထား
နော်" ကြက်ဥကြော်စားနေတဲ့ ကျွန်မကို သားက ငိုမဲ့မဲ့နဲ့ ပြန်ကြည့်ပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ် ခေါက်ဆွဲချက်စားတော့ ပထမတစ်ခေါက်လိုပဲ တစ်ပွဲက ကြက်ဥကြော်ပါပြီး
ကျန်တစ်ပွဲက မပါ ဘူး။
"လေးနှစ်သားကလေးတောင် သစ်တော်သီး မျှသေးတာပဲ..မေမေကို သားကြက်ဥ မျှပါတယ်" သားက
ပြောပြောရီရီနဲ့ ကြက်ဥကြော်မပါတဲ့ တစ်ပွဲကို ရွေးလိုက်တယ်။
"မရဘူး မေမေ" သားက ပြောပြောဆိုဆို ခေါက်ဆွဲကို စစားပါတော့တယ်။
ခေါက်ဆွဲကုန်တဲ့အထိ ကြက်ဥကြော်ကို သူမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ဥပါတဲ့ တစ်ပွဲရဲ့အောက်မှာ
ကြက်ဥကြော် နောက်ထပ်တစ်လုံး ၀ှက်ထားတာကို သားမြင်အောင် ပြပြီး
.."သား...ကိုယ်အသာရအောင် လုပ်တဲ့လူဟာ တခါတလေမှာ နစ်နာတတ် တယ်ဆိုတာ မှတ်ထားနော်"
ဒုတိယအကြိမ် သင်္ခန်းစာရလိုက်တော့ သားက မချိတင်ကဲနဲ့ သွားဖြီးပြပါတော့တယ်။
နောက်တစ်ခေါက် ခေါက်ဆွဲချက်ပြန်တော့ အရင်ပုံစံအတိုင်းပဲ တစ်ပွဲက ကြက်ဥပါပြီး
နောက်တစ်ပွဲက မပါခဲ့ ပြန်ဘူး။
" သား...ဒီနေ့ ဘယ်တစ်ပွဲစားမလဲ ? "
" မေမေဟာ လူကြီးပါ...မေမေ အရင်ရွေးပါ။ သားမေမေကို အရင်မျှပါတယ်"
"ဒါဆိုရင် မေမေ အားမနာတော့ဘူးနော်" ကြက်ဥကြော်ပါတဲ့ တစ်ပွဲကို ကျွန်မယူပြီး
သားက ဥမပါတဲ့ တစ်ပွဲကို စားနေခဲ့တယ်။ စားရင်းစားရင်း အောက်နားရောက်တော့
သူ့ခေါက်ဆွဲထဲမှာလည်း ကြက်ဥကြော် တစ်လုံးပါတာကို တွေ့လိုက်တယ်။
"သား....အသာမရချင်တဲ့လူဟာ နစ်နာမှုနည်းတယ်ဆိုတာ မှတ်ထားပါနော်"
သားက ကျွန်မအပြောကို သဘောတူကြောင်း ခေါင်းတစ်ဆတ်ဆတ် ညိတ်ပြတယ်။
ကျွန်မရဲ့အပြောကို အခုအချိန်မှာ သားဟာ သေချာသဘောပေါက်လိမ့်မယ် မထင်ဘူး။
ဒါပေမယ့် စကားသုံးခွန်းနဲ့ ခေါက်ဆွဲစား ခဲ့တာကိုတော့ သားတစ်သက် မေ့လိမ့်မယ်
Chawn Hong ၏ "ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး မိဘလုပ်ခြင်း" စာအုပ်မှ
တနေ့ မှာ အဖွား ကြီး တယောက် သွား ကိုက် ဝေဒနာ ကို အပြင်း အထန် ခံ စား နေ ရ ရှာ သ တဲ့...
အဘွားကြီး။ ။ မသိပါဘူး ဆရာရယ် သွားက တနေ့ထက်တနေ့ ပိုပို ပြီး ကိုက် လာ လို့ လာ ဆေးခန်းလာပြတာ ပဲ....
ဆရာဝန်။ ။ အမ် အဖွား က သွား ကိုက် နေ တာ လား... ဘာ လို့ ကျွန်တော့ ကို စောစော က မပြောလည်း.....
အဘွားကြီး ။ ။ မသိဘူး လေ ဆရာရယ် ... ကျွန်မက .. သွား ရဲ့ အမြစ် ကို ရှာနေတာမှတ်လို့...
Posted by သံလုံငယ် at 11:19 AM0comments
တနေ့ မှာ သားအဖ (၂)ယောက်စကားလက်ဆုံကြနေကြပါတယ်။ သားက အခုမှ စကားတတ်စ (၇)နှစ် ပတ်ဝန်းကျင် လောက်ပဲရှိပါအုံးမယ်။ အဲဒီမှာ သားက အဖေ့ ကို ဘာမေးလဲဆိုတော့ 
သား.... သားကိုအရမ်းချစ်တဲ့ သူ ရှိတယ် ...အဘွားပေါ့..သားကြီးလာရင် အဘွားကိုပဲ လက်ထပ်မှာဗျ
သား... ဟာ ..ဖေဖေ မရဘူးဗျာ ...အဘွား ကိုပဲ လက်ထပ်မယ် ...အဖေ့ ကျတော့ သားအမေ ကို လက်ထပ်ပြီး ..သားကျတော့ ဘာလို့ဖေဖေ့ အမေ့ ကို လက်ထပ်လို့ မရမှာလဲ ...?
Posted by သံလုံငယ် at 11:14 AM0comments
တိရစ္ဆာန်တစ်စု ၀ိုင်းဖွဲ့ စားသောက်နေကြသည် ။ အာသွက်လျှာသွက် ဖြစ်နေသဖြင့် စကားဝိုင်းသည် စိုးပြည်လှသည် ။ အရက်ကုန်သွားသဖြင့် အရက်ထပ်ဝယ်ရန် ဆုံးဖြစ်လိုက်ကြသည် ။ သို့နှင့် လိပ်ကို အရက်ဝယ်ရန် လွှတ်လိုက်၏ ။ တစ်နာရီ ၊ နှစ်နာရီ ကြာသွားသည် ။ လိပ်ပေါ်မလာချေ ။ တိရစ္ဆာန်များထဲမှ လိပ်ကို ကျိန်ဆဲသံများ ပေါ်ထွက်လာသည် ။ မနီးမဝေးချုံထဲမှ လိပ်ထွက်လာပြီး စိတ်ဆိုးစွာပြောသည် ။
"ကျွန်တော့်ကွယ်ရာမှာ အခုလို အတင်းပြောရင် ကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးဗျာ"
မတတ်နိုင် ။ လိပ်အစား ကင်းခြေများကို အ၀ယ်လွှတ်လိုက်ကြသည် ။ ငါးနာရီ ကြာမှ ကင်းခြေများပြန်ရောက်လာသည် ။ အားလုံးက ၀ိုင်းအော်ကြသည် ။
"ဟေ့ကောင် ........ မင်းသွားတာကြာလှချည့်လားကွ"
"အရက်ဆိုင် ၀င်ပေါက်မှာ ဘယ်ကောင်လဲမသိဘူး ။ ဆိုင်ဘုတ်တစ်ခု ချိတ်ထားလို့ "
" ဘာဆိုင်းဘုတ်လဲ "
"ဆိုင်ထဲမ၀င်ခင် ခြေထောက်ကိုစင်အောင်သုတ်ပါတဲ့ "
Posted by သံလုံငယ် at 11:12 AM0comments
တရားသူကြီးရှေ့မှောက်သို့ အိုင်းရစ်အမျိုးသား တစ်ယောက်ကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ ၏ ။
"မင်းဘာကြောင့် အလွန်အကျွံ သောက်ရတာလဲ" ဟု တရားသူကြီးကမေးသည် ။ ထိုအခါ
" ရထားပေါ်မှာ မကောင်းတဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့လို့ပါ တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာ ။ သူတို့က အရက်မသောက်တဲ့ သူလေးယောက်ပါ "
"ဟ.... မင်းတွေ့ခဲ့တာ အကောင်းဆုံး အပေါင်းအသင်းတွေပဲကွ "
"ကျွန်တော်အဲဒိလိုမထင်ပါဘူး ။ သူတို့မသောက်တော့ ၀ီစကီ တစ်လုံးကို ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ကုန်အောင်သောက်လိုက်ရပါတယ် ........ တရားသူကြီးမင်း "
Posted by သံလုံငယ် at 11:10 AM0comments
တစ်နေ့ လူတစ်ယောက်က ဒေါသတကြီး ပြောလိုက်ပုံမှာ
"အရက်ဟာ ကျုပ်ရဲ့ ရန်သူပဲ ။ ကျုပ်အဖေကို သတ်တာ ဒီအရက်ပဲဗျ"
" မောင်ရင့် အဖေက အရက်သိပ်သောက်သလား "
" မသောက်ပါဘူး ။ အရက်သေတ္တာ ပိပြီးသေသွားတာ "
ကဲ ........ ကောင်းရော .......... ။
Posted by သံလုံငယ် at 11:09 AM0comments
ရှက်ပြီး သတ်သေမဲ့ ဘီယာ
မကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့ ဖောက်သည်တစ်ယောက်က မဲ့၍ ရွဲ့၍ ပြောလိုက်၏ ။
"မကောင်းလိုက်တဲ့ ဘီယာ ၊ ဟောဒီ ဘီယာသာခေါင်းပါခဲ့ ရင် ရှက်ပြီး ကြိုးဆွဲချ သေမှာ အမှန်ပဲ" တဲ့ ။
> ချစ်သူတို့ ချစ်သက်တမ်းပိုရှည်ကြာအောင် ဖတ်ရှုသင့်သည့် အချက်အလက်များ
> 1. နာမည်ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲတာ မလုပ်ပါနှင့်
> 2. ချစ်သူရဲ့ ခန္တာကိုယ်အလေးချိန် နဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်း များကို အလှောင်ပါနှင့်
> 3. အပြုအမူကိုပဲဝေဖန်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တကို မဝေဖန်ပါနှင့်
> 4. စကားပြောနေစဉ် အခြားသူတစ်ဦး နာမည်ကို မကြာခဏမပြောမိပါစေနှင့်
> 5. စိတ်ကောက်နေစဉ် အခြားသူတစ်ယောက်နှင့် လုံးဝမတွဲပြပါနှင့်
> 6. ဘာမဟုတ်သည့် ကိစ္စကို မငြင်းပါနှင့်
> 7. ဖြစ်ပြီးသား ပြသနာများကို ပြန်မပြောဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ
> 8. ဖြစ်ပျက်သမျှ ကို သူငယ်ချင်းများကို မပြောပါနှင့်
> 9. သူကြိုက်သည့်အရာများကို မမုန်းပါနှင့်
> 10.အချို့ကိစ္စများကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပါ
> 11. ဒေါသနဲ့ စကားမပြောပါနှင့်
> 12. စကားများတိုင်း သူပြောတာကို နားထောင်ပေးပြီး စဉ်းစားပါ
> 13. သူစကားပြောနေစဉ် မကြာခဏ ဖြတ်မပြောပါနှင့်
> 14. ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို ပြီးဆုံးသည်အထိ မဖြေရှင်းပဲမနေပါနှင့်
> 15. ဘာအကြောင်းနဲ့မှ မအော်ပါနှင့်
> 16. သူသာ သင့်အတွက် အလိုအပ်ဆုံးဆိုတာ သူသိပါစေ
> 17. ချစ်သူက ချောလား၊လှလား မေးတိုင်း ပြုံးသာ ပြလိုက်ပါ
> 18. အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်း သင်ကသာ ငွေရှင်းလိုက်ပါ
> 19. သူ၏ရှေ့မှောက်တွင် အခြားသူများကို သိသိသာသာလိုက်မကြည့်ပါနှင့်
> 20. အမှတ်တရ ဖြစ်ရပ်များကို သတိရတိုင်းပြောပါ
> 21. ဖြစ်နိုင်လျှင် ချစ်သူ၏ မွေးနေ့ နှင့် ရည်းစားစဖြစ်သည့်နေ့ကို မှတ်ထားပါ(ပြန်မေးတတ်လို့ပါ)
> 22. တကယ်အရေးကြုံမှ ပိုက်ဆံချေးပါ
> 23. ဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံးကို သင်ကဦးအောင်တောင်းပန်လိုက်ပါ
> 24. အခွင့်အရေးရတိုင်း မယူပါနှင့်
> 25. လက်ဆောင်အသေးအမွှားလေးများ မကြာခဏပေးပါ။ ။
> (တကယ်ကိုယ်တွေ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အချက်အလက်လေးတွေမို့ ပြန်မျှဝေတာပါ)ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သင်ရဲ. နာမည် မှာပါတဲ. ABCD အက္ခရာ လေးတွေကနေ သင့်ရဲ့ စရိုက် ကို
ခန်.မှန်းနိုင်ပါတယ်။ မဆိုးဘူးနော်။ မှန်မမှန်သိချင်ရင် စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်လေ။
ကျွန်တော် တော့ စမ်းပြီးသွားလို့ မှန်တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ လုပ်နည်းက ဒီလို .......
ကျပေတော. ။ Good Luck !
ကဲ ဘယ်လိုလဲ ? တိုက်ဆိုင်မှုရှိမရှိ ကိုယ်ကိုတိုင်ဘဲ သိမှာပေါ့
အားလုံး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
တစ်ခါက အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာသူ့ချစ်သူ ကောင်မလေးဆီကနေ လက်ထပ်ခွင့်ရ တော့........
အမျိုးသား- အင်း နောက်ဆုံးတော့လည်း အကြာကြီးစောင့်ရကျိုးနပ်ပါတယ်....
အမျိုးသား-အမယ်လေး စိတ်ကူးထဲတောင် မထည့်လိုက်ပါနဲ့...
အမျိုးသား- ဘုရားစူးရစေရဲ့  ဒီမေးခွန်းမျိုး မေးတောင်မမေးပါနဲ့လား...
လက်ထပ်ပြီး ၁နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ စာကိုအောက်ကနေ အပေါ်ကို ဖတ်ရင်ပိုကောင်းမယ်နော်....
ကျွန်မယောက်ျားနဲ့ လက်ထပ်တဲ့နေ့မှာပဲသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်.... ကျွန်မသန့်ရှင်းရေးမလုပ်နိုင်ဘူး အိမ်မရှင်းနိုင်ဘူးလို့ ။ အဲ့ဒီနောက် သူ့ကို တစ်ရက်မမြင်ဘူး ၊ ၂ ရက်မမြင်ဘူး ၊ ၃ ရက်မြောက်နေ့မှာ ပုံးတစ်ပုံးနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ် အဲ့ပုံးထဲမှာစက်ရုပ်တစ်ရုပ်ပါလာပြီး အဲ့စက်ရုပ်ကပဲ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတယ် ။
ကျွန်မယောက်ျားနဲ့ လက်ထပ်တဲ့နေ့မှာပဲသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်.... ကျွန်မ ထမင်းချက်၊ ပန်းကန်ဆေးမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ။ အဲ့ဒီနောက် သူ့ကို တစ်ရက်မမြင်ဘူး ၊ ၂ ရက်မမြင်ဘူး ၊ ၃ ရက်မြောက်နေ့မှာ ပုံးတစ်ပုံးနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ် အဲ့ပုံးထဲမှာစက်ရုပ်တစ်ရုပ်ပါလာပြီး အဲ့စက်ရုပ်ကပဲ
ထမင်းချက် ပန်းကန်ဆေး အားလုံးလုပ်ပေးတယ် ။
ကျွန်မယောက်ျားနဲ့ လက်ထပ်တဲ့နေ့မှာပဲသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်.... ကျွန်မထမင်းချက်နိုင်ဘူး ပန်းကန်မဆေးနိုင်ဘူး ရေမခက်နိုင်ဘူး အိမ်မရှင်းနိုင်ဘူးလို့ ။ အဲ့ဒီနောက် တစ်ရက်မမြင်ဘူး ၊ ၂ ရက်မမြင်ဘူး ၊ ၃ ရက်မြောက်နေ့မှာ ဘယ်ဖက်မျက်လုံးနည်းနည်းပြန်မြင်လာတယ်
ဆရာမ။ ။ မနီ ကမ္ဘာကြီးကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းခဲ့သလဲ... ?
မနီအိပ်နေနေသဖြင့်မကြားသောကြောင့် နောက်မှာထိုင်နေသောကိုဖြိုးက ဘော့ပင်ဖြင့်ထိုး၍သတိပေးလိုက်သည်။ ထိုအခါ
မနီ။ ။ ဘုရားသခင် ( လန့်ပီးယောင်အော်ခြင်းဖြစ်သည်။)
ဆရာမ။ ။ တော်လိုက်တာ...နောက်ထစ်ခုထပ်မေးမယ်...တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကဘယ်သူလဲ.....သမီး ?
ဆရာမမေးသည်ကို.....မနီမ ကြားအိပ်လို့ကောင်းနေသည် ။ ကိုဖြိုးမှထပ်၍.....ဘော့ပင်နှင့်ထိုး၍သတိပေးရပြန်သည် ။
မနီ။ ။ ဂျီးဆပ်ခရစ် (လန့် ပီး..ယောင်အော်ပြန်သည်။)
ဆရာမ။ ။ မှန်ပါတယ်....ကဲ...နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်.....၂၃ ယောက်မြောက်ကလေးမွေးပြီးတဲ့အခါမှာ....ဧဝက..အာဒန်ကို.......ဘာပြောလဲ ?
ဒီတစ်ခါတော့ ကိုဖြိုးက မနီကိုဘော့ပင်ဖြင့်ခက်နာနာထိုးကာသတိပေးလိုက်သောကြောင့် မနီတော်တော်နာသွားကာ ရုတ်တရက်ထရပ်ပီး နောက်တစ်ခါငါ့ကိုထပ်ထိုးရဲထပ်ထိုးကြည့်......နင့်ဟာကိုထက်ပိုင်းချိုးပစ်မယ်..
အသက်ကြီးရင့်ပြီ ဖြစ်တဲ့ လက်သမားဆရာကြီးဟာ သူ့အလုပ်ကနေ ရပ်နားဖို့
ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့ အိမ်ဆောက်တဲ့ အလုပ်ကနေ ရပ်နားပြီး
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ဉာဏ်ပညာ ရှိရှိနဲ့ ဆောက်လုပ်ကြပါစို့လား။
၇။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ သင်ကိုယ်တိုင်ပဲ စမ်းကြည့်ပြီးမှ ယုံပါတော့။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ … ချစ်သူကို နမ်းရတာ ရင်ခုန်ကြည်နူးစရာ ကောင်းတယ်တဲ့။ နောက်ပြီး ပျော်စရာလဲ ကောင်းပါတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုလဲ။ ဟုတ်ရော ဟုတ်ရဲ့လား???
ဒီကဗျာလေးကို ရန်ကုန်မိဘမဲ့ဂေဟာမှာလည်း ရေးထားပါတယ်။ သတိထားမိတဲ့လူတိုင်း အမှတ်တရကူးလေ့ရှိသလို အနည်းဆုံးအသိတရားလေး ရသွားမယ့်မိဘများလည်း ရှိသွားခဲ့မှာပါ။ ဖတ်ပြီးလို့ကျေနပ်ရင် မျှဝေပေးဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ မိဘမဲ့တွေရဲ့ဘ၀ကို မြင်ယောင်ပေးကြပါ...။
ကျနော်တို့ရဲ့ အိမ်ပြန်ချိန် ဟိုရှေ့က ကလေးတစ်ယောက် အနာဂါတ်တွေကျပျောက် မျက်ရည် တစ်ပေါက် နှစ်ပေါက် ကျရင်း သူဆိုတဲ့ ညည်းချင်းက အဖေနဲ့အမေက သူခေါ်လို့ရှိရင် ကြားနိုင်ပေမယ့် ခေါ်ခွင့်မရှိတဲ့ နေရာမှာတဲ့ သူလျှောက်သွားနေတဲ့ လမ်းကျဉ်းလေးက အန္တရာယ်တွေရှိရာ သူ့ကိုခေါ်ဆောင်သွားလေရဲ့။ ဘုရားတောင်ခြေရင်းမှာ အဖွားအိုတစ်ယောက် တောင်ဝှေးထောက်သံ တဒေါက်တဒေါက်နဲ့ အတိတ်ကို နောက်ပြန်ရစ် ကြည့်ရင်း သူချစ်တဲ့ သားသမီးတွေမှာ ဒုက္ခတွေ တထမ်းတပိုးနဲ့ ကျိုးပဲ့နေတဲ့ မြို့ပြလူနေမှုကြောင့် သာဓုခေါ်သံတွေ အကြိမ်ကြိမ်ထိမှန်ခံထားရတဲ့ ပိန်ချိုင့်ချိုင့် ခွက်လေးတစ်လုံးကို ကိုင်စွဲရင်း တဒင်္ဂ ငြိမ်းအေးခြင်းကို သူရှာဖွေနေလေရဲ့။ အဝေးမှာ ဟိုး....အဝေးကြီးမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ လူတချို့ လွတ်မြောက်မှု ဧရိယာ ကိုယ့်ဖာသာ ဖန်ဆင်း အံကြိတ်ခြင်း တောက်ခေါက်ခြင်း ခါးထောက်ခြင်းတွေနဲ့ ထွီကနဲ တံတွေးတပျစ် စစ်အာဏာကိုရင်ဆိုင် တနေ့နိုင်ရမယ်လို့ အိမ်မက်ကိုစားသုံးရင်း သူတို့ကြီးပြင်းကြလေရဲ့။ နေခြည်ဖြိုးတောက် လူသူမရောက်တဲ့ မိုးမခ တောတွေမှာ ဟမ်ဘာဂါအစား မျှစ်တူးစားလို့ ကိုကာကိုလာမလို ကက်ပ်ချိနီု မသောက် ငှက်ပျောအူဖေါက် သူတို့သောက်လို့ ဖေါင်တိန်မကိုင် သေနတ်ကိုင်လို့ နုပျိုစိမ်းလန်း အနာဂါတ်ပန်းတွေ အိမ်ပြန်မဲ့ရက် လက်ချိုးရေရင်း....တော်လှန်ရေးသီချင်းဆိုကြလေရဲ့။ နောက်တနေရာကတော့ လသာတဲ့ညတွေကို မော်ကြည့်လို့မရတဲ့ နံရံလေးဖက် ကြားမှာပေါ့ ခံယူချက်ရဲ့ အကျည်းသားတွေဟာ အခဲမကျေ အငြိုးတွေကိုစားသုံးရင်း ယုံကြည်ခြင်း နှလုံးသားတွေခမျာ တဖြည်းဖြည်း မာကျောလာလေရဲ့။ အချိန်ရှိသရွေ့ လွမ်းနေရတဲ့ နေရာအသီးသီးမှာ ငါတို့ ပြည်ထောင်စုသားတွေ ရှိနေတယ် ငါတို့ကိုယ် ငါတို့တည်ဆောက်ရင်း တချို့ ပြိုလဲကျတယ် ယုံကြည်ချက်တွေ ဖျားနာကုန်တယ် တချို့ကျတော့ သန်မာနေစဲ အံတွေခဲလို့ လှေခွက်ချည်းကျန် အလံမလဲဘူး အော်....အိမ်ပြန်ချိန်တွေ နီးဖို့ကြိုးစားရင်း အိမ်နဲ့ ဝေးဝေးသွားတဲ့ ငရဲက ဘယ်တော့များမှ.......လွတ်မြောက်မလဲ။ မင်းရန်နိုင် ========================================================================================== A to Z အချစ်နဲ့ ပက်သက်လာရင် ကိုယ်ရဲ့ခွန်အားတွေဆိုတာဟာ (A)ရာဝတီတိုင်းမှာ မွှေနှောက်တိုက်ခတ်သွားတဲ့ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းလေမုန် တိုင်းလို ကြီးမားပါရဲ့ မေရယ်.....။မေ့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ .. (B)လူး၊ဂုမ္ဘာန် ၀န်းရံစောင့်ကြပ်နေအုံးတော့၊ ကိုယ် ဘာလို့ မှုနေရမှာလဲ ..ဟင်း ..ဟင်း ..၀ီစကီထဲ (C) ပလပ်ရောစပ်ပြီးဆတ်ခနဲ မော့ချလိုက်ရင်း ရန်စွယ်တွေမှန်သမျှ အန္တရာဃ်တွေဟူသမျှကို ဟော (D)ကောင်ဖြေရှင်းသုတ်သင်ပြပါမယ်မေ။ တကယ်တော့ ကိုယ်ဟာ မေနဲ့ပက်သက်လာခဲ့ရင် အင်မတန်မှ စွဲလမ်းစိတ်ကြီးမားတဲ့သူပါမေရယ်၊ဘယ်လောက်တောင်မေ့အပေါ် စွဲ လမ်းသလဲဆိုတော့ မေအမှတ်မထင် လွှတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ (E) သံကလေးကိုတောင် အာရုံထဲမှာ စွဲငြိနေပါ သေးတယ်၊ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အဖို့တော့ ကြင်နာ သူက လမ်းခွဲသွားရင် ကိုယ့်အသည်းတစ်ခုလုံး (F) ကွဲကြေမွသွား မှာသေချာပါတယ်မေ၊ မေရယ် ကိုယ်မေတ္တာကို တုံ့ပြန်ပေးပါ။ ကိုယ့်ကို ချစ်ခွင့်ပေးပါ၊ ကိုယ်မြတ်နိုးတဲ့ ပန်းကလေးရဲ့ ရနံ့ကို ပိုင်ပိုင်နှိင်နှိင် ရှိုက်နမ်း မွှေးကြူခွင့်ပြုပါ။ သည်လိုတောင်းဆိုလိုက်တာတွေနဲ့ ပက်သက်လို့ ကိုယ်ဟာ အင်မတန်မှ (G) ကျတဲ့ သူရယ်လို့လည်းထင်မှတ် မသွားပါနဲ့အုံး။ မေရယ် ... ကိုယ်တောင်းခံထားတဲ့အချစ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး (H) ချင်ယောင်လည်း ဆောင်မနေပါနဲ့တော့၊ ကိုယ်ဟာတစ်သည်းမှာတစ်သက်၊ တစ်သက်မှာတစ်သည်း၊ မျက်နှာလည်း မများတက်သလို (I) တွေတိုင်းလည်း ခြေဆေးတက်သူ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ယုံထားလိုက်စမ်းပါ၊ ကိုယ်အခု (J) ရုဆလင်နိုင်ငံနဲ့ ပက်သက်တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်နေတယ်မေ၊ ပြည်တွင်းစစ်မှာ အချင်းချင်း တိုက်ကြခိုက်ကြနဲ့ အငြိုးအတေးကလည်း ကြီးပါ့၊ နဖူးကအမာရွတ် မြင်လေတိုင်း မင်းမဟော်ကို အခဲမကျေဖြစ်နေတဲ့ (K) ၀ဋ် ပုဏ္ဍားတောင် လက်မြှောက် အရှုံးပေးလောက်ပါရဲ့၊ မေနဲ့ကိုယ်တို့ကြားမှာတော့ လက်ကလေးတွေ တွက်ချိူးရေဖို့ရာ အမျက်ကလေးတွေ သက်ဆိုးမရှည်ခဲ့ပါဘူးနော်၊ ကိုယ်သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ့်ကိုမေးကြတယ်၊ ကိုယ်ဟာမေ့ရဲ့ (L) စတုံအိုးကြီးကို သဘောကြလို့ ချစ်သွားတာလားတဲ့၊ ရယ်ပဲရယ်စရာ ကောင်းသေးတော့၊ ကိုယ်က မေ့ရင်ထဲက ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားလေးကိုသာ ချစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့် (M) ပြောပြလိုက်မှ ငြိမ်သွားကြတယ်၊ ဒါတောင်မှ အထွန့်တက်လာကြသေးတယ်။ မေရယ် .......။ (N) ဏ္ဏဝါလှိုင်းရေပြင်ထက်မှာတော့ ငှက်မောင်နှံက တူယှဉ်တွဲ ပျံသန်းလို့ပေါ။ ကိုယ်ဟာ မေ့အပေါ် (O) မင်းရင့်ရော်တဲ့အထိ မပြယ်သောမေတ္တာများနဲ့ ချစ်သွားမယ်သူပါ၊ သည်လိုမျိူး မေ့ အပေါ် ထားတဲ့သစ္စာ မ (P) ပြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အဏ္ဏဝါမြစ်ရေအလျဉ်ကို အန်တုတားဆီးနေတဲ့ (Q) ပင်တွေကို နှုတ်ပြီး ကိုယ့်ရင်ဝကို ဆောင့်ထိုးလိုက်ပါတော့။ ကိုယ်ဟာ ဖြီးဖြန်းအပိုကဲလို့ မညာတက်သလို ကျီးကန်းလိုလည်း မ (R) တက်ပါဘူး၊ ကိုယ်အချစ်က ငရဲမီး (S) ဆစ် အစားခံရတဲ့ ဇဗ္ဗူရာဇ်ရွှေစင်နှလုံးသားပါ မေရယ်၊ စကားတွေကို (T) တီတာတာ မဖွဲ့နွဲ့ တက်ပါဘူး၊မေတ္တာတွေပေးခဲ့ပြီင်္း သူမို့ မေတ္တာကိုတော့ ပြန် (U)ချင်ပါတယ်မေ။ ကိုယ်အခု ချောင်းသာကမ်ခြေကို အလကားခေါ်မယ့်သူရှိလို့ ရောက်နေတယ်မေ။ သည်စာကို ပင်လယ်က (V) ပင်တစ်ပင်အောက်မှာ ရေးနေတာ။ သည်အချိန်မှာပဲ ဘယ်ကကန်ထည့် လိုက်မှန်းမသိတဲ့ (W) ဘောလုံးတစ်လုံးက ကျောကုန်းကိုလာမှန်တယ်၊ အမယ်လေးလေး၊ အောင့် လိုက်တာ၊ နာလိုက်တာ၊ အဆုတ်တွေ ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး၊ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့မှပဲ (X) ရေး ဓါတ်မှန် ရိုက်ကြည့်ရတော့မှာပဲ။ စာလည်းရှည်သွားခဲ့ ပြီ ....... မေ။ သည်းခံပြီး ဖတ်တာ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။ အဲ ....... တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ကိုယ်အပေါ် မေ့ ဆီက မေတ္တာ တုံ့ပြန်မလာဘူး ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဟာ အင်ဂျင် (Y) နဲ့ ပိုးသတ်ဆေး သောက်ရင်း (Z) ကျိုးလို့ နိဂုံး ချူပ်သွားပါလိမ့်မယ်။Tongue out